1915ပြီ XNUMX ။
အဘယ်အရာကိုသံလိုက်နှင့်မြေထုဆွဲအားများအကြားစပ်လျဉ်းဖြစ်ပြီး, မှာအားလုံးပါလျှင်ဘယ်လောက်သူတို့က, ကွာခြားသလဲ? အဘယ်သည်သံလိုက်နှင့်တိရစ္ဆာန်သည်သံလိုက်အကြားစပ်လျဉ်းဖြစ်ပြီး, မှာအားလုံးပါလျှင်ဘယ်လောက်သူတို့က, ကွာခြားသလဲ?
အပြုသဘောဆောင်သည့်သိပ္ပံပညာသည်မြေထုဆွဲအားဆိုသည်ကိုမဖော်ပြထားပါ။ သို့သော်သိပ္ပံပညာရှင်များလေ့လာတွေ့ရှိပြီးမြေထုဆွဲအားဟုခေါ်သည့်အချက်အလက်များသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုစီ၏ဒြပ်ထုများအရအခြားကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးတွင်ရှိသည့်ဆွဲအားတစ်ခုရှိခြင်းနှင့်ဆွဲအား၏အင်အားသည်လျော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုအတိုချုပ်ဖော်ပြထားသည်။ အလောင်းတွေအကြားအကွာအဝေး၏တိုးနှင့်၎င်းတို့၏အနီးကပ်နှင့်အတူတိုးပွားလာသည်။ မြေထုဆွဲအားဟုခေါ်သောအချက်အလက်များသည်ကိုယ်ခန္ဓာရှိအမှုန်များ၏အစီအစဉ်ကိုလေးစားခြင်းမရှိဘဲကိုယ်တိုင်ပြသသည်။ ထို့ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုအားလုံးသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆွဲငင်အားဟုဆိုကြသည်။
သံလိုက်စွမ်းအားသည်သိပ္ပံပညာကိုသတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်သာပေးနိုင်သောသဘာဝကိုရည်ညွှန်းသည့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောစွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သံလိုက်အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောအချက်အချို့ကိုသိပ္ပံပညာရှင်များသိထားကြသည်။ သံလိုက်သည်သံလိုက်မှတဆင့်မိမိကိုယ်ကိုပြသောစွမ်းအားဖြစ်သည်။ သံလိုက်တစ်ခုသည်အမှုန်အားလုံး (သို့) အချို့သည် polarity နှင့်တူသောအမှုန်များအတွင်းရှိဝင်ရိုးစွန်းများအကြားရှိဝင်ရိုးများသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အပြိုင်ဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အပြိုင်ပုဆိန်နှင့်အတူအမှုန်များ၏အပြုသဘောထမ်းဘိုးတို့ကိုတ ဦး တည်း ဦး တည်ချက်ညွှန်ပြ, ဤအမှုန်များ၏အနုတ်လက္ခဏာဝင်ရိုးစွန်းဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်ချက်ညွှန်ပြ။ ခန္ဓာကိုယ်သည်အပြိုင်သို့မဟုတ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အပြိုင်ဝင်ရိုးတန်းတူသောဝင်ရိုးရှိသည့်အမှုန်များ၏ကြိုတင်တွက်ချက်မှုအရသံလိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စင်ကြယ်သောဝင်ရိုးနှင့်မတူသောအမှုန်အရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက polity နှင့် parallel axes ကဲ့သို့သောအမှုန်အရေအတွက်နှင့်အချိုးအစားအရ magnet သည်စုံလင်ခြင်းကို magnet အဖြစ်ချဉ်းကပ်သည်။ သံလိုက်သည်အရာ ၀ တ္ထု၏ဒြပ်ထုအချိုးအစားအရဆိုရလျှင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှတဆင့်ပေါ်လွင်ခြင်းနှင့်ပုဆိန်ကဲ့သို့တူညီသည်။ သံလိုက်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနေရာအနှံ့အပြားတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သက်မဲ့အရာဝတ္ထုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
တိရိစ္ဆာန်အလောင်းများတွင်တူညီသောစွမ်းအားသည်မြင့်မားသောစွမ်းအားကိုရရှိသည်။ တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်သည်တိရိစ္ဆာန်များကိုယ်ခန္ဓာမှတစ်ဆင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသဘောသဘာဝရှိသည့်အခါ၊ သံလိုက်ဖြစ်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံသည်ဆဲလ်အတွင်းရှိအမှုန်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်ကိုယ်ခန္ဓာရှိဆဲလ်များဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ရန်လိုသည်။ သို့မှသာစကြဝmagneticာသံလိုက်အားဖြင့်၎င်းတို့မှတစ်ဆင့်စီးဆင်းလိမ့်မည်။ ကြောင်းအဆုံးမှဖွဲ့စည်းပုံသက်မဲ့သက်ရှိသံလိုက်များနှင့်ဆင်တူသည်။ ဆဲလ်အတွင်းရှိအမှုန်များကိုကျောရိုး၏သက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းနှင့်အရိုးရှိတွင်းခြင်ဆီသို့ချိန်ညှိ။ ချိန်ညှိသောအခါတိရိစ္ဆာန်အလောင်း၏ ၀ င်ရိုးမှာကျောရိုးဖြစ်ပြီးတိရစ္ဆာန်ခန္ဓာကိုယ်များသည်သံလိုက်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏တိုင်များမှလုပ်ဆောင်မှုသည်အာရုံကြောများမှဖြစ်သည်။ သံလိုက်ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်လယ်ပြင်သည်ကိုယ်ခန္ဓာပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလေထုဖြစ်သည်။ ဤနယ်မြေ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွင်းသို့ရောက်ရှိလာသောမည်သည့်တိရိစ္ဆာန်အလောင်းများသည်မဆိုသံလိုက်တိရိစ္ဆာန်ခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဆင့်စီးဆင်း။ တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်ဟုခေါ်သောစကြဝuniversalာသံလိုက်စွမ်းအား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ကြုံနိုင်သည်။
တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသံလိုက်ဓာတ်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသံလိုက်ဓာတ်ဟုခေါ်သည့်အရာကိုထုတ်လုပ်ရာတွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။ တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်ရှိခြင်းသည် hypnotism မဟုတ်ပါ၊ တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်ရှိသူများသည်၎င်းကို hypnotic သက်ရောက်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ linga sharira, ဒါမှမဟုတ်မမြင်နိုင်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံစံ, ဘဝအဘို့သိုလှောင်မှုဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝလည်ပတ်မှုအတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာသံလိုက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ Linga sharira တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ၀ င်မှုများပါ ၀ င်ပါက၎င်းသည်သံလိုက်ညှိခြင်းတွင်ရှိသောအမှုန်များရှိပါက၎င်းသည်သက်ရှိများကိုသိုလှောင်ထားနိုင်ပြီးတိရိစ္ဆာန်သံလိုက်ဟုခေါ်သောရှုထောင့်အောက်ရှိသက်ရှိများကိုထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။
မေးခွန်း၏အဖြေမှာဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမြေထုဆွဲအားနှင့်တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်အကြားတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ဒြပ်ထုတိုင်းသည်အခြားဒြပ်ထုအားလုံးကိုဆွဲယူသည်၊ ဆွဲငင်အားဟုခေါ်သောအင်အားသည်အချိန်တိုင်းလှုပ်ရှားသည်။ သို့သော်တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်ဟုခေါ်သည့်အင်အားသည်အချိန်အခါမရွေးလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းတိရိစ္ဆာန်ဖွဲ့စည်းပုံရှိမှသာထိုအမှုများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်သည်။ အရာ ၀ တ္ထုများအမှုန်များ polarization နှင့်ပုဆိန်စစ်မှန်ခြင်းသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်သောတစ်လောကလုံးစွမ်းအားဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဆဲလ်များကိုတိကျသောနည်းလမ်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းနှင့် polarization နှင့်စီစဉ်ခြင်းသည်စကြဝuniversalာတစ်ခုလုံးကိုလူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့သွေးဆောင်။ သက်ရှိများကိုအခြားတိရိစ္ဆာန်ခန္ဓာကိုယ်သို့တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
နာမကျန်းသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်သည်၎င်း၏အမှုန်များ၏စနစ်တကျစီစဉ်ထားမှုကင်းမဲ့သည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်ဘဝစီးဆင်းမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်ပုံမှန်အသက်ရှူခြင်းနှင့်ဘဝလည်ပတ်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်ရှိသူနှင့်တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်အလွယ်တကူကူးစက်သောသူတစ် ဦး သည်အခြားသူများ၏ရောဂါများကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။ သူသည်ကိုယ်ချင်းစာခြင်းမရှိဘဲမိမိရောက်ရှိနေခြင်းအားဖြင့်သူသည်အနာပျောက်စေနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သူသည်အနာရောဂါကုသရန်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုခြင်းဖြင့်ကုသနိုင်သည်။ အနာရောဂါပျောက်ကင်းစေခြင်း၏ရှေ့မှောက်တွင် ပြုလုပ်၍ ကုသခြင်းကိုပြုလုပ်သောအခါ၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလေထုအတွင်းရှိဖျားနာနေသောလူများအားဝိုင်းထားခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ လေထုသည်တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဝဖြင့်စွဲကပ်ထားသောသံလိုက်အိမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်သည်စကြဝuniversalာကြီး၏အင်အားကြီးမားမှုအတွက်နာမည်ကောင်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုထိုနေရာတွင်အသုံးပြုပြီးထိုအချိန်ကာလ၏အကျွမ်းတဝင်ရှိမှုကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ထိုရေချိုးခြင်းသည်ဖျားနာနေသောလူ၏လေထုအပေါ်သက်ရောက်ပြီးသက်ရှိစွမ်းအားများရရှိစေရန်အတွက်အတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ ပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဆဲလ်အတွင်းရှိမော်လီကျူးများပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်စကြဝlifeာရှိသက်ရှိအင်အားဖြန့်ဝေမှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးသည်။ အဆက်မပြတ်စီးဆင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၎င်းတို့၏သဘာဝလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်အားဖြင့်ကုသခြင်းသည်အနာရောဂါကုသသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သောအခါအနာရောဂါကုသသူ၏လက်သည်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဝင်ရိုးစွန်းများအဖြစ်လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ် (သို့) ထိခိုက်သည့်အစိတ်အပိုင်းပေါ်တွင်ထားသောအခါအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မျက်လုံး၊ ရင်သားစသည့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမှမဆိုသံလိုက်စွမ်းအားသည်ထွက်ပေါ်လာနိုင်သော်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏သဘာဝအရနည်းလမ်းများမှာလက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ရောဂါပျောက်ကင်းစေခြင်း၏အရေးကြီးသောလက္ခဏာမှာကုသသူ၏စိတ်သည်သံလိုက်ဓာတ်ကိုပြန့်ပွားစေခြင်းကိုမတားဆီးရန်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်စိတ်သည်ကုသခြင်း၏လွှမ်းမိုးမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရောဂါပျောက်ကင်းသူသည်သူ၏စိတ်နှင့်သံလိုက်စီးဆင်းမှုကိုညွှန်ကြားရမည်ဟုမကြာခဏယူဆသည်။ ရောဂါကုသသူသည်သံလိုက်နှင့်သက်ဆိုင်သောသူ၏စိတ်နှင့်ပြုမူလုပ်ဆောင်သည့်အခါတိုင်းသူသည်အနာရောဂါကိုပြုလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာစိတ်သည်ကုသခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်သံလိုက်စွမ်းအားကိုညွှန်ပြ။ အရောင်ခြယ်နိုင်သည်။ စိတ်သည် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၏သဘာဝအပြုအမူကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်။ တားဆီးထားသည်။ စိတ်ဖြင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိပါကသံလိုက်သည်သဘာဝကျလိမ့်မည်။ စိတ်ရောဂါသည်စိတ်ကိုမဟုတ်ဘဲသဘာဝကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လူ၏စိတ်သည်သဘာဝကိုမသိ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ၌မည်သည့်အခါ၌ရှိသည်ကိုကိုယ်တိုင်မသိပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌သာသူ့ဟာသူသိလျှင်စိတ်သည်သဘာဝနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။